Noocyada gawaarida isboortiga ugu wanaagsan | Ragga Stylish
Waan ognahay in gawaarida isboortiga ay had iyo jeer soo jiiteen dareenka naqshadahooda iyo waxqabadka wadada. Waxaa jira noocyo badan oo caan ah oo awood u yeeshay inay ka faa'iideystaan ​​nashqadeynta noocan ah suuqooda gudaheeda waxayna awood u yeesheen inay soo saaraan gawaarida waaweyn ee isboortiga.
Noocyada kale waa kuwo gaar ah oo had iyo jeer waxay ku jireen darajada ugu sareysa in la dhiso gawaaridan isboortiga ee waaweyn. Waa gawaari heer sare ah oo aan shaki ku jirin iyagu waa shardi dariiqa jecel, abuuro damacyo waxaana heli kara oo kaliya dhowr qof oo khiyaano badan. Qeybteenna waxaan ku tuseynaa kuwa ugu caansan noocyada gaariga.
1 Noocyada gawaarida isboortiga
Noocyada gawaarida isboortiga
Shaki la'aan waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan iyo Waxay calaamad u tahay gaariga isboortiga ee caanka ah ee leh astaanta Faraska Prancing. Abuuraha wuxuu ahaa Enzo Ferrari oo sumaddan waxay ku dhalatay Talyaaniga 1929. Waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan noocyadooda oo aan ka yareyn.
Moodooyinka ugu fiican ayaa ahaa Ferrari 250 GTO, oo leh 302 HP iyo tiro u dhiganta 280 Km / h, in kastoo kuwa kale sida Ferrari F40 ama F50, oo labaduba leh ku dhowaad 500 HP oo koronto ah oo gaara in ka badan 300 km / saacaddii. Ku Ferrari enzo Wuxuu sidoo kale dejiyay qaabka iyo Ferrari LaFerrari Waxay ahayd mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan leh 963 HP ee awoodda iyo jebinta rikoodhada xawaaraha laga bilaabo 0 illaa 300 km / saacaddii 15 ilbidhiqsi.
Nooc kale oo gaar ah oo qayb ka ah shirkadda weyn ee Volkswagen Group. Takhasuskiisa, sameynta gawaarida isboortiga, gawaarida isboortiga super-ga iyo gawaarida raaxada-dhamaadka sare. Qaabkiisa wareegsan wuxuu soo jiitaa indha indhayn wuxuuna had iyo jeer doorbiday naqshad gaar ah isagoon ka bixin qaabka. Ku Porsche 911 Waa mid ka mid ah moodooyinka taariikhda sameeyay, maadaama ay suuqa ka jirtay 20 sano. Ku Porsche 911 GTS RS wuxuu ka mid ahaa hal abuurnimadiisii ​​ugu dambeysay 700 oo fardo ah iyo 340 km / saacaddii. Laakiin sida hanashada ugu weyn ee Feedhyahan Porsche 718 Iyadoo leh matooro waaweyn oo turbocharged ah iyo nabadgelyada waddooyinka oo weyn, waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah gawaarida ugu fiican adduunka.
Mar labaad Talyaaniga waxaan ka helnaa mid kale oo ka mid ah gawaarida isboortiga iyo tan waxaa lagu gartaa raaxo iyo awood. Noocani wuxuu ka mid ahaa astaamaha lagu garto mootooyinka waxaana sanadkii 2007 la abuuray Maserati Gran Turismo 2018 oo wata aaladda V8 waxayna gaaraysaa in ka badan 300 km / h. Waxay u timid inay soo saarto ilaa 37.000 unug oo leh laba nooc: Ciyaaraha iyo MC.
Waa sumad Jarmal ah taas had iyo jeer waxay u taagnayd fasalkeeda iyo quruxdeeda weyn. Moodooyinkeeda ayaa had iyo jeer loo doortaa inay ka fiicnaadaan moodooyinka kale ee dhammaadka-sarreeya iyagoo ka qayb qaadanaya abuurista gawaarida isboortiga. Waxaan leenahay Mercedes 300SL Waxaa la sameeyay 1955 oo ah gaariga ugu horreeya ee isboortiga, qaabeyntiisu wali waa jawharad.
Mercedes-AMG Sidoo kale waa baabuur halyeey ah laakiin nooca casriga ah ayaa lagu bartay Coupe ama Roadster isaga oo aad uga sii weynaanaya. Baabuur aad uga yar ayaa la sameeyay oo lagu rakibay 8-hooras 4.0-litir mataano-turbo V469 ah. Mashiinkaani waa mid cajiib ah wuxuuna leeyahay kalsooni wanaagsan wadada, wuxuuna gaarayaa 100 km / saacaddii 3,3 ilbiriqsi.
Baabuurkan raaxada leh ayaa ah midka ugu jecel umana baahnid inaad u sheegto James Bond oo caan ah. Sannadkii 1913-kii calaamaddan ayaa ku dhalatay gacanta Aston Martin oo leh imaatinno iyo socod badan sababo la xiriira khilaafaad aad u muhiim ah taariikhdeeda. Horeba 80-meeyadii iyo 90-meeyadii sumadda ayaa la xoojiyay oo la abuuray moodello caan ah sida Aston Martin Virage ama Aston Martin DB7. Xitaa waxay u fureysaa warshad dhismaha matoorada V8 iyo V12. Baabuurtooda hadda waxay ka kooban yihiin 4 nooc: The Aston Martin DB9, Aston Martin Vanquish, Aston Martin Vantage iyo Rapide S. Qaar ka mid ah gawaaridan ayaa ka badan $ 3 milyan.
Calaamaddan waxaa abuuray Talyaani Ferruccio Lamborghini sanadkii 1963 waana in la ogaadaa inuu aad u jeclaa mishiinada beeraha. Moodooyinkeedu waxay leeyihiin muuqaal isboorti aad uwanaagsan waxayna astaan ​​u tahay albaabadeeda kor looqaaday, marka laga reebo xaqiiqda ah in soosaarida gawaarida taxanaha ah ay aad uyartahay Moodooyinka qaarkood sida Lamborghini veneno kaliya 3 nooc ayaa la sameeyay.
Mid ka mid ah moodooyinka ugu fiican ayaa ah V12 Aventador LP 700-4 maadaama jidhkeeda iyo qaabkeedu yahay mid aan fiicnayn. Waxay gaareysaa ilaa 350 km / saacaddii waxayna gaareysaa 100 km gudaha 2,9 ilbidhiqsi, oo leh 700 hp. Mid kale oo ka mid ah moodooyinkeeda waaweyni waa Aston Martin DB11 Waxaa dhiirigeliyay DB10 oo kaliya 10 unug ayaa la abuuray, oo leh V12 biturbo engine iyo 600hp.
Mana seegi karno Aston Martin vulcan, Baabuur arxan daran dhan walba. Waxay leedahay awood ah 831 hp iyo dareenkiisa giraangiraha wuxuu abuuraa kacsi. Qiimaheedu waa qiyaastii 2,7 milyan oo euro oo kaliya 22 unug ayaa la soo saaray.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » motor » Noocyada gawaarida isboortiga ugu fiican
Catarka ugu guulaha badan sanadihii ugu dambeeyay